Raw N-Methyl-D-aspartic Acid (NMDA) Poda (6384-92-5) - Phcoker
Raw N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) poda inogamuchira vanopokana mukirasi ye …………
Raw N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) poda (6384-92-5) vhidhiyo
Raw N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) poda (6384-92-5) Tsananguro
Raw N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) poda inoita basa rakakosha mune neuroendocrine mutemo. Iyo ine yakakodzera kukosheswa inogona kukanganisa iyo muviri endocrine system, kunyanya kusimudzira iyo hormone zvakanyanya (GH) kuchengetedzwa kwemhuka yemhuka kuwedzera ropa GHlevel. Iyo zvakare inogona kukanganisa kuwanda kwesero chiitiko nekudzivirira DNA synthesis yePC12 maseru.
Raw N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) upfu (6384-92-5) Specifications
Product Name Raw N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) upfu
muchiso Name Raw N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) upfu
N-methyl-D-aspartic acid (NMDA) inoshanda senge chaiyo agonist kuNMDA receptor, uye nekudaro inotevedzera maitiro eiyo neurotransmitter glutamate pane iyo receptor. Sekuziva kwedu, glutamate ndiyo inofadza neurotransmitter inowanikwa mune mazhinji masynapses epakati ehurongwa hwetsinga, uye varapi vemishonga vakaita iyi analogue yekumisikidza sub-mhando ye glutamate receptors. Sezvo paine akawanda glutamate receptors, unogona kusiyanisa pakati pavo pharmacologically nemishonga yakasiyana, uye NMDA powder ndeimwe yemishonga iyi. Kupesana ne glutamate, NMDA inosunga uye inogadzirisa iyo NMDA receptor chete, isina zvainoita kune mamwe ma glutamate receptors.